Cabaña «la Marimba» ihostele apho Alex, La Barra - I-Airbnb
Cabaña «la Marimba» ihostele apho Alex, La Barra
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAlexander
Indawo yehostele isuswe kancinci kuluntu, ingaphakathi kwifama "el PalmMAR". Iikhabhini zinemibono yehlathi le-mangrove kunye ne-coconut kunye nezityalo ze-chontaduros. Indawo yasehostele ineentyatyambo ezininzi kunye nezityalo. Ulwandle luhamba ngemizuzu emi-3 ukusuka ehostele kunye nevenkile imizuzu emi-2. Iindwendwe zinokukhetha ukutya kwindawo yokutyela yasehostele apho kukho ukutya okumnandi okuqhelekileyo kwingingqi.
Indawo yasehostele imnandi kakhulu kuba kuthe cwaka, uva nje izandi zendalo. IMarimba inamagumbi ayo okuhlambela kunye neshawari yabucala. Ine-terrace ene-hammock kunye netafile kwaye igumbi linebhedi ephindwe kabini, ibhedi enye kunye nefeni. Kukho indawo eluhlaza eyaneleyo ejikeleze ukuqinisekisa ukuzola kunye nokuba yimfihlo kweendwendwe. Indawo yonke yenzelwe ukunika ukuphumla kunye nokuvisisana kwiindwendwe. Ekuseni, iiparrots nezinye iintaka ezahlukahlukeneyo ezimi emithini nasentendeni yefama zinokubukela.
4.59 · Izimvo eziyi-34
Ifama apho ihostele ikhona yimizuzu emi-2 ukusuka kwisitrato esikhulu apho unokufumana iibhiliyoni, iivenkile, iivenkile zokutyela, ibha kunye nedisco. Ulwandle lukwahamba ngemizuzu emi-2-3 ukusuka ehostele. Ngasemva kwehostele kukho umlambo we-mangrove kwaye ngaphambili kukho amasimi ekhokhonathi. Indawo yehostele inemfihlo eninzi kuba ikwifama yabucala. Iikhabhini zijikelezwe ziintyatyambo kwaye unokubona iintaka ezininzi kunye neengcungcu.
Ndiyathanda kakhulu ukwabelana ngenkcubeko yam nabahambi abeza kwindawo yam. Ndihlala ndihoye nantoni na xa kukho into elahlekileyo iindwendwe. Ndinikezela ngohambo lwam lwendalo ukuya kwimangrove kunye namachibi anamanzi acwengileyo, kuluntu lwemveli kunye nakwiingxangxasi ezithile eLa Salva. Ndinganikezela ngokuloba kwezemidlalo. Ndihlala kwindawo yehostele ukuze naziphi na iingxaki ezinokubakho iindwendwe zinokuxelwa ngokulula kum.
Ndiyathanda kakhulu ukwabelana ngenkcubeko yam nabahambi abeza kwindawo yam. Ndihlala ndihoye nantoni na xa kukho into elahlekileyo iindwendwe. Ndinikezela ngohambo lwam lwendalo u…
Inombolo yomthetho: 188629